စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတစ်ယောက်က – Live the Dream
General ,ဆောင်းပါး နှင့် သတင်းများ ,ဆောင်းပါးများ ,ဘဝ
ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး လူ့ဘဝကြီးမှာ ရှင်သန်ကျင်လည်ကြရင်းနဲ့ ပိုရင့်ကျက်တဲ့ သူတစ်ယောက်၊ ဘဝကို ပိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ နေတတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူ တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြရတယ်။ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစု၊ အချစ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး အဲလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပြဿနာမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြဖို့ တစ်ချို့တွေကတော့ စိတ်ဓာတ် သိပ်ခိုင်မာတယ် အံကြိတ်ပြီး တင်းထားနိုင်တယ်၊ အဆုံးထိ လျှောက်နိုင်တယ်၊ ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း အားအင်တွေ နည်းပါးလိုက်တာ ဘယ်လိုမှကို မရပ်တည်နိုင်ဘူး သတ္တိ မရှိဘူး။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့ မာသလိုလိုနဲ့ အရမ်းပျော့ပျောင်းတဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေပြန်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု ဆိုတာကလည်း ပြောသလောက် မလွယ်လှဘူး။ လှည့်စားမှု၊ ရက်စက်မှုတွေ ပြည့်နေတဲ့ လောကကြီးမှာ ကျရှုံးသွားဖို့က တကယ့်ကို လွယ်လွယ်လေး။ အဲ့တော့ ဘဝမှာ မရှုံးရလေအောင်၊ နေတတ်အောင် မာကြောသန်မာလှတဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ လိုအပ်တာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမျိုးကို စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်လို့ ခေါ်သလဲ၊ ဘာကိုကြည့်ပြီး ပြောသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ချို့ ထွက်လာပြန်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေအကြောင်း နည်းနည်းလောက် အနက်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်။ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်နှစ်ချက်များ ကိုက်ညီလဲ စစ်ဆေးကြည့်ပေါ့ ကိုယ်ဘယ်လောက် မာလဲ သိရအောင်။ အားလုံး တူနေရင်တော့ တကယ့်ကို Bravo ပါနော်။
၁. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသနားဘူး
စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေ ဆိုတာက ဘဝမှာ ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲတွေ အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသနားပို မနေပါဘူး။ “ငါ့ ဘဝလေးက သနားစရာ ကောင်းလိုက်တာ” ဆိုပြီး ဒရာမာတွေ ခင်းနေမယ့်အစား ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကိုသာ သူတို့ ပိုပြီး ဦးစားပေး စဉ်းစားပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သနားပြီး အားငယ်နေတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ကုမပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်သလို မကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ဖြစ်လာဖို့၊ လမ်းမှားကို လိုက်သွားဖို့ ကိုယ်တိုင်က တွန်းအားပေးနေသလိုပါပဲ။ ဘဝမှာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်သာ ရေးရတာမို့ ဒီအချက်ကို သေချာ နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
၂. တခြားသူ လွှမ်းမိုးတာ မခံဘူး
ဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေ အများစုက မိဘတွေ လွှမ်းမိုးတာ ခံရတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ လွှမ်းမိုးတာ ခံတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် လွှမ်းမိုးတာ ခံတယ် ဒီနေရာမှာ ခင်မင်တာ၊ စကားနားထောင်တာ၊ ချစ်တာတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးခံရတာ လုံးဝ မတူပါဘူးနော်။ ဒီလိုပြောလို့ မိဘစကား နားမထောင်နဲ့ ဆိုလိုနေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း၊ အမှား အမှန် ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော် မတော်၊ ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အရာတွေကို သေချာစဉ်းစားပြီး ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ဆံုံးဖြတ်ချက်လေးတောင် မချနိုင်တဲ့ သူက တကယ့်ကို အသုံးမကျတဲ့သူပါ။
၃. ပြောင်းလဲဖို့ မကြောက်ဘူး
အခြေအနေတိုင်းက ပုံစံတစ်ခုတည်း အနေနဲ့ ဖြစ်တည်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် မတူညီနိုင်သလိုမျိုး အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာတဲ့ သူတစ်ယောက်က ပြောင်းလဲမှုကို နည်းနည်းလေးမှ မကြောက်ပါဘူး။ ဒါဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတရားပဲ ဆိုတာ နားလည်ထားပြီးသားလေ။ သူတို့က အခြေအနေတိုင်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် လိုရင် လိုသလို အေးအေးဆေးဆေး ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ သည်းခံသင့်ရင် သည်းခံတယ်၊ လုပ်သင့်တာကို လုပ်တယ်၊ ပြောသင့်တာကို ပြောတယ်။ ပုံစံခွက် တစ်ခုတည်းမှာပဲ နေပြီး ပြောင်းလဲမှုကို ကြောက်နေရင်တော့ တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေး အလှမ်းဝေးပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်မှသာ တော်ကာကျမှာပါ။
၄. မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာအပေါ် စိတ်ညစ်မခံဘူး
လောကကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ သက်သက်စီ ရှိပါတယ်။ မိုးရွာတာကို ထိန်းချုပ်မရသလို မိုးရွာလို့ ဆိုပြီး စိတ်တွေညစ်၊ ဆူပုပ်နေရင် ကိုယ်လုပ် ကိုယ်ခံပါပဲ။ ကိုယ် ထိန်းချုပ် မရတဲ့ အရာအပေါ် စိတ်ညစ်ခံ ခံစားနေတာက အချိန်ကုန်တာပဲ ရှိတာပါ။ ပြောင်းလဲသွားတာ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ သူ့ဘာသာ ဖြစ်တည်လာတဲ့ အရာတွေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ မိုးရွာတာ ကြည့်ပြီး ပြုံးမလား၊ ရွှံ့တွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်တိုမလား ကိုယ့်ဘာသာရွေးပေါ့။
အကောင်းမြင်စိတ် ရှိဖို့ဆိုတာ တကယ်ကို မလွယ်ပါဘူး။ လူတွေဆိုတာကလည်း အဆင်မပြေတာနဲ့ စိတ်တို ဒေါသ ထွက်လွယ်ကြတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ အကောင်းမြင်စိတ် ရှိတဲ့အပြင် စိတ်ကိုလည်း အေးဆေး ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ အဆိုးမြင်ပြီး စိတ်အလိုတိုင်း လုပ်တာက အကျိုးမရှိမှန်း သိထားတာကိုး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဘက် ကနေ တွေးလိုက်တာက စိတ်ကိုလည်း ပိုပြီး သက်သာစေသလို စိတ်ညစ်တာလည်း လျော့စေတယ်လေ။ ဒါကြောင့်မို့ ကိစ္စတိုင်းကို ထစ်ခနဲရှိ စိတ်တိုမယ်၊ ပေါက်ကွဲမယ်၊ ဒေါသထွက်မယ်၊ ငိုမယ် ချည်း မတွေးဘဲ အကောင်းဘက်ကနေ မြင်တတ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
အောင်မြင်မှု တစ်ဝက်၊ ကျရှုံးမှု တစ်ဝက် ရောပါနေတဲ့ စွန့်စားမှု ဆိုတာကြီးကို လူတိုင်း သတ္တိရှိရှိ ရင်မဆိုင် ရဲကြပါဘူး။ တစ်ချို့တွေက ထွက်ပြေးကြတယ်၊ ရှောင်သွားကြတယ်၊ မစွန့်စားရဲဘူး တကယ်လို့များ ရှုံးသွားခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးနဲ့ ရှေ့မထွက်ရဲကြဘူး။ ဒါပေမယ့် စွန့်စားတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေ အတွက်ကတော့ ပျော်စရာတစ်ခု၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တစ်ခုပါပဲ။ စွန့်စားမှုတွေ ရှိမှ ရှင်သန်ရတာ အဓိပ္ပါယ် ရှိတာ ဆိုပြီးတော့ ခံယူထားကြသူတွေပါ။ အဲ့တော့ အေးဆေး စိန်ခေါ်ရဲတာပေါ့။ ရှောင်ပြေးတာထက် စွန့်စားလိုက်ပြီး ရှုံးသွားခဲ့ရင်လည်း အရှုံးကနေ သင်ခန်းစာယူ၊ ပြန်ရုန်းထတတ်ကြတာပါ။ ဘဝဆိုတာ သူတို့အတွက်တော့ စွန့်စားခန်းကြီးပဲလေ။
၇. အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားတယ်
အတိတ်ရဲ့ ချည်နှောင်မှုကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ အတိတ်က နာကျည်းမှုတွေ၊ အမှားတွေ၊ မကျေနပ်မှုတွေ၊ ဒဏ်ရာတွေ အဲဒီအရာတွေကနေ မရုန်းထွက်နိုင်ဘဲ ပိတ်မိနေသူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ခုထိ ခံစားနေကြတုန်း၊ ခုထိ နှောင့်ယှက်တာ ခံနေရတုန်းပဲ မပြောင်းလဲ နိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အတိတ်ဆိုတာ အတိတ်ပဲလေ။ အခုချိန်မှာ ပြောင်းလဲလို့ မရတော့ဘူး၊ ဘာမှ ပြုပြင်လို့ မရတော့ဘူး။ ပြောင်းလဲလို့ရတာ အနာဂတ် တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကတော့ ပြောင်းလဲ မရတဲ့ အတိတ် ဆိုတာထက် စိတ်ကြိုက် တည်ဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့ အနာဂတ်ကို ပိုအာရုံစိုက် ကြတာပါ။
၈. တခြားသူရဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ် မနာလို မဖြစ်ဘူး
မနာလိုစိတ် ဆိုတာ အရမ်းအင်အားကြီးပါတယ်။ အဲဒီ မနာလိုစိတ်ကြောင့်ပဲ ပျက်စီး သွားသူတွေ အများကြီး၊ ဒုက္ခရောက်သူတွေ အများကြီး။ ကိုယ့်ထက်သာသွားရင် မနာလိုဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်ထက်လှရင်၊ ကိုယ့်ထက်တော်ရင်၊ ကိုယ့်ထက် ဦးစားပေးခံရရင်၊ ကိုယ့်ထက် အောင်မြင်ရင် မနာလိုဖြစ်တယ်။ ပြောရရင် လူတွေကို ဖျက်စီးဖို့ အကောင်းဆုံး လက်နက်တစ်ခုပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် စိတ်တွေ တည်ငြိမ်လို့ တကယ်ခိုင်မာ သွားပြီဆိုရင်တော့ မနာလိုတာက ဘာမှမဟုတ်ပါလား ဆိုတာ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် မနာလို ဖြစ်နေမယ့်အစား တခြားသူရဲ့ အောင်မြင်အတွက် ဝမ်းသာအားရ လက်ခုပ်တီးပေးနိုင်မှာပါ။
တစ်ခါရှုံးတာနဲ့ လက်မြှောက်လိုက်တယ် ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ သူတွေရဲ့ ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုက လွယ်လွယ်မရမှန်း၊ အောင်မြင်မှု တစ်ခါရဖို့ ရှုံးနိမ့်မှု အများကြီးကို ဖြတ်ကျော်ရမယ်ဆိုတာ သေချာ သိထားတာမို့ တစ်ခါလောက် ရှုံးတာက သူတို့ စိတ်ကို လဲဖြိုနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မလုံလောက်တာ အမှန်ပါ။ တစ်ခါရှုံးတိုင်းသာ လက်လျှော့ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးက ဒီလောက်တောင် တိုးတက်နိုင်ပါ့မလား။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရှုံးဆိုတာ မကြုံချင်လည်း ကြုံရမယ့် အရာတစ်ခုပဲမို့ အရှုံးပေါင်းများစွာအတွက် ရင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပါ။
၁၀. တစ်ယောက်တည်းလည်း နေတတ်တယ်
လူတွေက တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်လို့ မရတာ မှန်ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေ တွေမှာလည်း အေးဆေးပါ ဆိုပြီး ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ “တစ်ယောက်တည်း မနေတတ်ဘူး၊ တစ်ယောက်တည်း မလုပ်နိုင်ဘူး” ဆိုတာတွေက ကလေးတွေ ပြောတဲ့စကားပါ။ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်လည်း ရတယ် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် အေးအေးဆေးဆေး ရပ်နိုင်တယ်၊ အကူအညီမရှိလည်း နေနိုင်တယ် ဆိုတာမျိုးက စိတ်ဓာတ် တကယ်ခိုင်သူတွေရဲ့ ခေါင်းထဲ အမြဲရှိနေတဲ့ အရာပါပဲ။
၁၁. မတရားတဲ့သဘောကို နားလည်တယ်
လောကကြီးက မတရားမှန်း လူတိုင်း သိထားကြပြီးသား၊ တစ်ခါတစ်လေ ရက်စက်တတ်တာလည်း အားလုံး မျက်မြင်ပဲ။ ဒါကြောင့် လောကကြီးရဲ့ မတရားမှုကို အသားကျဖို့ အရေးကြီးပါတယ် “လောကကြီးက မတရားဘူး၊ ငါ့ဘဝကို ဒီလို ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်” ဆိုရင် ဘယ်သူကများ တရားမျှတအောင် လာလုပ်ပေးလိမ့်မလဲ။ ဒီတစ်ခါ မဟုတ်လည်း နောက်တစ်ခါ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ဦးမှာပဲ။ လောကကြီးက အမြဲတမ်း မတရားမှုတွေနဲ့ စမ်းသပ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ လက်ခံတတ်အောင်၊ နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဒါဆိုရင် ဘဝကို နေတတ်ရင် ရတယ် ဆိုတဲ့ စကား ဘာကြောင့်များ ပြောခဲ့ကြသလဲဆိုတာ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ခုရေတွင်းတူး၊ ခုရေကြည်သောက်လို့ မရတာကို တစ်ချို့တွေ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ မျှော်လင့်တာက အခု စလုပ်လိုက်တယ် ပြီးရင် ပြောင်းလဲမှုတွေ ချက်ချင်း ဖြစ်လာမယ် ဆိုပြီးတော့လေ။ ဘယ်အရာမှ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ဖြစ်လာတာတော့ မရှိပါဘူး အားလုံး သူ့ဟာနဲ့သူ အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးရတာချည်းပါပဲ။ ဥပမာ Gym တစ်ရက်ဆော့လို့ ခန္ဓာကိုယ်က မော်ဒယ်လေးလို ပြောင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုပြီးမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံက တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာမှာ။ ဒါကြောင့် စိတ်ရှည်ပါ စိတ်လောတာက ဘယ်နေရာမှာမှ မကောင်းပါဘူးနော်။